धोखाधडी - मैले यसलाई कसरी सम्भाल्नु पर्छ? हामी आफैलाई जीवनमा फर्किनेछौं?
तपाईंले साझेदारीबाट अपेक्षा गर्नुभएको बारे सोच्नुहोस्
प्रेममा हुनुको अर्थ तपाईंको साथीको हातमा सुरक्षित र सुरक्षित महसुस हुन्छ। कुनै साझेदारीको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पूर्ण भरोसा हो। तर यदि यो भरोसा दुर्व्यवहार गरिन्छ? धोका दिएपछि जीवनमा सबैभन्दा कष्टकारी अनुभवहरूमध्ये एक हो। तपाईं त्यस्ता धोखाधडी कसरी रोक्नुहुन्छ र तपाइँ कसरी आफ्नो जीवनको जीवनलाई भेट्टाउनुहुन्छ?
धोखा गरियो - पहिले स्पष्टता प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुहोस्
पहिलो केही दिनमा सबै भ्रमहरू, दु: खी र आत्म-संदेह जीवनमा प्रभुत्व गर्दछन्। प्रायजसो धोकाएका व्यक्तिहरूले आफैंको साथीको अजनबीमा दोषी ठहराउँछन्।
धोखा दिए - म यो कसरि व्यवहार गर्छु?
सबै विचारहरू र भावनाहरू क्रमबद्ध गर्न समय लिन महत्त्वपूर्ण छ। निराश र दु: खी हुनु पूर्ण रूपमा वैध छ र यो विश्वासको यस्तो उल्लङ्घनको प्रक्रिया गर्न समय लाग्छ। स्पष्ट हुन प्रयास गर्नुहोस्। उनीहरूका सबै फरक विचारहरू विचार गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई कसरी सम्हाल्न सकिन्छ?
आत्म-संदिग्ध, क्रोध र दु: खीको सर्पबाट बचाउन आफ्नो भित्री आत्मसँग व्यवहार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ - चाहे तुरुन्तै साथीहरू वा व्यावसायिक सहयोगको साथ।
तपाईंको सम्बन्धको नजिकको नजिक लिनुहोस्। यस सम्बन्धको लागि प्रेरणा के थियो? आफ्नो भावना र सम्बन्ध संग व्यवहार पीडादायक छ र निश्चित रूपले सजिलो छैन, तर यो प्रशोधन प्रक्रियाको भाग हो।
आफैलाई समय रुनुहोस्, चिन्ता र दुखी गर्न समय दिनुहोस्, तर ती भावनाहरूमा आफैलाई गुमाउनु हुँदैन। तपाइँका साथीहरू तपाई जस्तै हुनुहुन्छ जुन तपाईंको हो र तपाईको छेउमा उभिएको छ। तपाईं भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, आफ्नो आँसूहरू, ड्रेस अप, र बाहिर निस्कनुहोस्।
मित्रहरु संग एक कफी, माम वा एक लामो पार्टी रात्रिको साथ एक चलचित्र राईले तपाइँको मायालु एक साथ तपाईंलाई मदत गर्नेछ। व्याकुलको हरेक घण्टा तपाईले राम्रो गर्नेछन्।
तपाईंले आफ्नो भावनालाई पूर्णरूपमा दमन गर्नुपर्दैन, तर तपाईले सधैँ आफैले थोडा ब्रेकमा व्यवहार गर्न सक्नु भएको छ र फेरि चरणको चरण अगाडी हेर्न सक्षम हुनुपर्दछ। तपाईंका साथीहरू आत्म-संदेह र आत्म-दोष विरुद्ध लडाइँमा ठूलो सहयोगको हुनेछ।
एक साझेदारीको लागि रिश्तेदार हत्यारा
आफैलाई केहि राम्रो बनाउनुहोस्
अहिलेको लागि सोच्नुहोस्। तपाईले सधैं के गर्न चाहानु भयो? इच्छा वा लक्ष्य पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाइँ पूरा गर्न चाहानुहुन्छ र यसलाई आजकल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं फेरि आफैले अझ राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ भने, तपाईं बलियो हुन र तपाईंको नयाँ सम्बन्धमा पुग्न विश्वस्तताको मार्गमा राम्रो हुनुहुन्छ।
नयाँ पार्टनर पत्ता लगाउने निश्चित रूपमा त्यस्तो अनुभव पछि सजिलो छैन, त्यसैले तपाइँ साझेदारीको अपेक्षाको बारेमा स्पष्ट हुन सबै कुरा महत्त्वपूर्ण छ। समझौता बनाउने हरेक पक्षको भाग हो, तर तपाईं आफ्नो इच्छा र आवश्यकताको बारेमा खुला हुनुपर्छ।
यदि तपाईं लामो-समय, भरोसा सम्बन्धी सम्बन्ध खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यसलाई सुरूबाट स्पष्ट बनाउनुहोस्। अविश्वसनीयताको कारणले गर्दा साझेदारीको लागि, शुरुवातबाट बोझिएको छ। आत्मविश्वास र खुसीसाथ खोज्नुहोस् र साहसी भई एक नयाँ प्रेममा पुग्नुहोस्।